प्रहरीकै यस्तो बिजोग! – www.agnijwala.com
प्रहरीकै यस्तो बिजोग!
मुगुको चैनागाउँ प्रहरी चौकी मन्दिर परिसरभित्र छ। भवन नभएपछि मन्दिरभित्रको टहरोमा प्रहरीले दिन काटिरहेका छन्। शंकास्पद व्यक्ति समातिँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
सल्यानको लुमाहस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय शिवालय मन्दिरको जग्गामा छ। जग्गा नपाएपछि प्रहरीले मन्दिरको जग्गामा कार्यालय राखेको हो।झापा किचकबधस्थित प्रहरी चौकीको हालत पनि उस्तै छ। किचकबध संरक्षण समिति भवनमा प्रहरी कार्यालय छ। स्थानीयले प्रहरीलाई समिति भवन दिएका हुन्। पाँचथरको च्याङथापु सीमा प्रहरी चौकी भाडाको घरमा छ। पाँचथरका अधिकांश प्रहरी भवन भाडामै छन्।
तराईका प्रहरी इकाइको अवस्था पनि उस्तै छ। जनकपुर, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका देहाद (गाउँ) का चौकीको अवस्था नाजुक छ। फुसले छाएको छाप्रोमा इकाइ राखिँदा गर्मी, वर्षा र जाडोमा कष्टपूर्ण जीवन जिउन प्रहरी बाध्य भएको डीआईजी नेउपाने बताउँछन्।
perfectseoтиц этоforbes.net.uaпроверить входящие ссылки на сайтdns и ns записи разницабелые туфли купить